Kooxaha Premier League oo ka carooday la wareegitaanka Newcastle United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Kooxaha Premier League oo ka carooday la wareegitaanka Newcastle United
Kooxaha kula xifaaltama Premier League ee Newcastle United ayaa lagu soo waramayaa inay aad uga caroodeen ka dib la wareegitaankii kooxda.
Khamiistii, ayaa la xaqiijiyay in isbaheysiga uu Sacuudigu taageeray ay dhameystireen la wareegitaankii St James Park, taasoo soo afjartay murankii Mike Ashley ee 14ka sano.
Milkiilayaasha cusub ee Newcastle iyo Amanda Staveley ayaa ku dhawaaqay inay damacsan yihiin inay dib ugu soo celiyaan St James ‘Park xeendaanka gudaha iyo kuwa Yurub, laakiin la wareegidda ayaan si fiican u helin taageero kooxaha kale ah.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , 19-ka naadi ee kale ee heerka sare ah ayaa diyaarinaya kulan degdeg ah oo ay la yeelanayaan Premier League si ay u dalbadaan sababta la wareegidda Newcastle loo oggolaaday.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in Liverpool , Arsenal iyo Tottenham Hotspur ay dhammaantood si weyn uga soo horjeedeen tallaabadaas, iyadoo guddoomiyaha Spurs Daniel Levy uu isku dayay si uu u joojiyo milkiilayaasha cusub ee Newcastle.
Newcastle ayaa durbadiiba lala xiriiriyay saxiixyo badan oo heer sare ah ka dib markii ay la wareegeen, iyadoo Philippe Coutinho loo maleynayo inuu wadahadalo kula jiro u dhaqaaqista Waqooyi Bari.
Previous articleRonald Koeman oo doonaya mid kamid ah Xidigaha aan Booska ka heysa Manchester United
Next articleCristiano Ronaldo oo kula taliyay Manchester United inay lasoo Wareegto Xidig ka tirsan Juventus